ढाँचा गरिएको स्किड
आधुनिक संसारमा, धेरै जना जनावरहरूलाई भूमिका दिइएको छ। र यी पाहुनाहरूको विविधता बन्द छ। तपाईं एक सामान्य बिल्ली , चूहा, कछुआ , हम्सटर र घर मा एक साँप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। घरेलू साँप बीच सबैभन्दा सामान्य प्रजाति एक नमूना स्किड हो।
कैदीमा राख्नको लागि, चढ्ने स्टिकहरूको यो सानो सानो आकारमा (120 डिग्री सम्ममिटरसम्म लम्बाइन्छ) र रंगहरूको उज्ज्वल विविधता। सांपको रंग हरियो ब्राउनदेखि पहेँलो र पहेंलो रङबाट भिन्न हुन्छ। सामान्य पृष्ठभूमिमा धेरै (प्रायः चार) हल्का रङको चम्किलो स्ट्रिपहरू देखिन सकिन्छ। त्यहाँ व्यक्तिहरू गाढा पारगमन स्पट भएका हुन सक्छन्।
ढाँचा गरिएको स्किडको सामग्री
घरमा, ढाँचा गरिएको स्किड क्षैतिज टेरारियममा धेरै सहज महसुस गर्नेछ, न्यूनतम आकार 70x40x40 छ। क्रम मा एक सांप खाने देखि बचने को लागि प्रत्येक दोश्रो प्रत्येक टेरारीम मा एक को एक मा राख्नुहोस।
साथै टेरारियममा स्थापित क्षमता हुनुपर्छ, पूल स्लाइडलाई प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। त्यहाँ उहाँले पिउने, तैरने, र moulting सीजन समयमा गीला प्राप्त हुन्छ। यसबाहेक, पूलको उपस्थितिले प्रत्येक पटक तारिखमा आवश्यक आर्द्रता स्तर कोयम राख्न अनुमति दिन्छ। आदर्श रूपमा, यो कम से कम 60-70% हुनुपर्छ।
बेडको रूपमा, काठको छाल, सानो ढुङ्गाहरू, ठूला चट्टानहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यद्यपि तपाईं पनि एक प्राइमर बिना गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईंको पाल्तुको आनन्दले शाखाको निवासमा स्थापित ल्याउनेछ जुन क्रमशः स्किड चढ्न सक्छ।
तेरारियमको विभिन्न भागहरूमा मानक तापमान फरक हुनुपर्छ। एक साँप गर्म र चिसो कोना बनाउनुहोस्। सेल्सियसको तापमानको तातो कुनामा 25-30 डिग्री भित्र उज्यालो पर्छ, र 22-25 डिग्री भित्रको चिसो। राती, तापमान शासन5डिग्री भित्र कम हुन्छ। तापमान क्षेत्रको विभाजन टेरारियमको एक छेउमा सेन्ट गरेर (प्राप्त गर्न मिल्ने बलियो सामग्रीसँग बन्द गर्न बिर्सने छैन) र अन्यमा अतिरिक्त ताप बनाउने सेट गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
ढाँचा गरिएको स्किडको हेरविचार गर्नुहोस्
टेरारियममा आवश्यक सबै चीजहरूको अतिरिक्त, त्यहाँ एक सानो घर वा कम्तिमा केहि आश्रय हुनुपर्छ। त्यो ठाउँ हो जहाँ ढाँचा गरिएको स्किड लुकेको छ। Sphagnum संग एक cuvette संग आश्रय कुनामा हावा। यसले साँपलाई माउन्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
दिनको तापनि सम्पूर्ण दिनको घण्टाको समयमा काम गर्नु पर्छ, आफ्नो सक्रिय जीवनको समयमा ढाँचामा दौडनेको लागि मानक। यो समय 12 घण्टा छ। यस अन्तरालमा, कम से कम एक पल्ट यो गर्म पानी संग टिरेरियम स्प्रे गर्न आवश्यक छ। निरन्तर छिटो राख्नुहोस्।
कसरी ढाँचाबद्ध स्किडलाई सही तरिकाले हेरविचार गर्न, तपाइँ यी सांपहरूको बारेमा धेरै जानकारी सामग्री जान्न आवश्यक छ। उचित हेरचाहको साथ तपाईंको पाल्तुले तपाईलाई आफ्नो उपस्थितिको बारेमा लगभग 10 वर्षसम्म खुसी गर्नेछ। यदि सांप तपाईं "बचपन देखि," आफ्नो महान महत्वको लागि मौसम को परिवर्तन हुनेछैन। उछाल हाइबेरेशन समयको लागि पर्याप्त एक महिना हुनेछ। यो अवधिको समयमा, ताररहितको थोरै तापमान कम गर्नुहोस् र तपाईंको पादरी नफर्नुहोस्।
यो प्रकारको साँप पोषणमा धेरै उल्लेखनीय छ। चूहों, चकहरू, साना चराहरू, सांपको सांप भन्दा सानो। तिनीहरू पनि एम्फिबियन्सहरू (माढकहरू वा छेउहरू, उदाहरणका लागि), माछाहरू, ठूलो कीराहरू पनि खान्छन्। सांपले आफ्नो शिकार पहिला गजल गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसपछि यसले लारसँग निस्कन्छ र यसलाई पहिलो टाउको निल्छ। निस्सन्देह, कुखुराको सानो नमूना अझै पनि जिउँदैन।
एक्वैरियम बगहरू - छनौट र सामग्रीको मुख्य नग्नताहरू
कुन क्याप्सनहरू बिरालो गर्छन् र कहिले?
कुखुराको लागि फीडहरू आफ्नै हातहरू
कुत्तों को सबै भन्दा खराब नस्लों
कुत्तों को नृत्य खिलौना टेरियर
शर्पी - नस्ल का वर्णन
रेलमा जानवरहरूको परिवहनको नियम
कुकुरमा कीडे - परजीवीहरूको लक्षण र उपचार
डिसोसिएटिव पहिचान विकार
स्याउसँग जोडिएको छ - घरको पकाएको सामानको लागि6उत्तम व्यञ्जनहरू
एक महिलाले कसरी सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न सक्छ?
लियो एन्जलसमा क्लोनी दम्पती: जर्जले सबैलाई उनको हेरचाह लगाउनुभयो
खरानीको मासुको साथ माटो
22 सेलिब्रेटीहरू जसले आफ्ना छोराछोरीको मृत्युलाई बचाउथे
स्टोर्सका साथ पर्दा
छोटो मिङ्क फर कोट - के के गर्न र फैशनेबल छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने?
मुद्रा को लागि व्यायाम
विवाहको कपडा कुकुला
बास्केट संग मशरूम - नुस्खा
मेगन फक्सको पति
वयस्कहरु मा दंगा को उपचार को लागि ड्रग्स